Vaovao - NITOYO TAMIN'NY FARANY CANTON faha-130 dia nifarana tamin'ny fomba tonga lafatra
Paompy solika Assy
Paompy fampandehanana herinaratra
Esory ny hery
Ny rafitra frein
NITOYO TAMIN'NY FAIRY CANTON FAHA-130 dia nifarana tamin'ny fomba tonga lafatra
FAHAFANTARANA NY RCEP ?
VAOVAO LEHIBE NITOYO
PARTS AUTO RECOMMENDER AMIN'NY DESAMBRA
Ndeha horesahina momba ny PARTS ELECTRINICAL AUTO
NY VAOVAO INDRINDRA FOTOANA FIVORIANA Sinoa farany indrindra
Nandritra ny 130th Canton Fair avy amin'ny 15th ho 19th Nandray anjara i Nitoyo, manana fampirantiana an-tserasera sy ivelan'ny aterineto izahay, ary nihaona tamin'ireo namana taloha sy namana vaovao.
Tamin'ny fampirantiana an-tserasera dia nandeha tany Guangzhou ny mpiara-miasa 4 taminay niaraka tamin'ny santionany tamin'ny kojakoja sy katalaogy tsirairay avy.Izy ireo no tompon'andraikitra amin'ny rafitra fifindran'ny, rafitra motera, rafitra fampiatoana ary rafitra elektrika, izy rehetra dia tena za-draharaha, ny zandriny indrindra dia manana traikefa 3 taona amin'ny indostria, ary ho an'ny fitarihana ity fampirantiana ity dia manana fampirantiana sy foara maro i Jason. traikefa eran-tany, satria efa tao amin'ny fanondranana kojakoja fiara nandritra ny taona maro ny torohevitra omeny momba ny vokatra sy ny tsena dia tena matihanina.
Ho an'ny fampirantiana an-tserasera dia mampakatra ny vokatra lehibe amin'ny sehatra an-tserasera amin'ny Canton Fair izahay ary manana fandefasana mivantana 4 isan'andro, ny streamers mivantana dia ny mpitantana ny vokatra sy ny mpitantana ny varotra, afaka manazava amin'ny mpanjifa ny vokatra sy ny tsena, manome anao ny torohevitra matihanina indrindra ary manampy anao hamaha olana ary hanafoana ny fisalasalana.Araka ny voalazan'ny teny filamatra“fantatrao ny tsenanao, fantatray i Shina.Raha nijery ny mivantana mivantana ianao dia mety ho mazava tsara momba an'i Nitoyo, tsy ny vokatra ihany, fa ny serivisy sy ny tombony.Ao amin'ny stream mivantana dia nampiditra ny orinasanay mazava ny streamers mivantana ary nizara ny tantara tamin'ny orinasa sy ny mpanjifa, tena mahaliana.raha ratsy vintana ianao't mahita ny mivantana mivantana, azonao atao ny mikaroka“NITOYO”on YOUTUBE, ampiakarinay ao amin'ny YouTube ihany koa ilay fotoana mahaliana, manantena fa tianao.
TNifarana tanteraka ny fivoriana 2 tamin'ny Canton Fair tamin'ny taona 2021, faly izahay nihaona tamin'ny namana maro.And ho avy ny ririnina, mety ho lavitra ve ny lohataona?Let'Manaova fotoana amin'ny lohataona, amin'ny 131thCanton Fair.
Raha mila fanontaniana momba ny vokatray na ny lisitry ny vidiny, azafady avelao ny mailakao aminay dia hifandray izahay ao anatin'ny 24 ora.